MAQAAL: M/WEYNE GOBOL : MAGAC KHALDAN (WRONG JOB TITLE) - Latest News Updates
MAQAAL: M/WEYNE GOBOL : MAGAC KHALDAN (WRONG JOB TITLE)
Magaca M/weyne gobol waa mid lagukhaldamay marki la sameynaayay eray bixintamaamul goboleedyada. Waana arrinta horseedayinay madaxda gobollada ku dhegaan meeshi ay qabsadaan. Ma jiro mid oggol in booska lagabeddelo oo qof kale loo doorto, waa haddiiwaxa dhacaya doorasho lagu sheegi karo. Balaan meelo kala duwan ka fiirino xaaladaha ay ku sugan yihiin Madaxda Gobollada
AXMED MADOOBE – JUBALAND
Siduu ku yimid booska waa la ogaa iyo doowrkiuu ku lahaa M/weyne Xasan Sheikh oomarxalado kala duwan ka soo maray dhidib u aasida Jubaland iyo dhibaatooyinki ka jiray: Maanta waxaa la filaayay inuu M/weyne AxmadMadoobe salligiisa ka laalaabto Kismaayo uuisaga tago kana towba keeno wixi gefaf kadhacay inti uun jiray maamulkiisa Nasiib darro,weli waa soo taagan yahay wuxuuna u muuqdaamaanta inuu diyaar u yahay in dowladdaSomaliya ay dunto ama Kenya dalka oo dhanama Jubada Hoose ay la wareegto.
Axmad Madoobe cid uu wax u oggol yahay ma jirto, waxaana ka muuqata inuu diyaar u yahaydagaal lagu wada hoobto si aysan doorasho ugadhicin gobolka Jubaland.
AXMED G. XAAF –GALMUDUG
Xaaf waxay ka mareysaa mel ka xun tan heysataAxmad Madoobe. Wuxuu abaabulayaa kulan ay isugu yimaadiin Madaxweynayaasha gobolladaoo dhan, haddii laga ajiibo wicitaanka uu isugukeenayo Madaxda Gobollada. Tafaasiil farabadan ee isaga ku saabsan wxaad ka heli kartaamaqaalkii ahaa DHAMBAAL KU SOCDA AXMAD XAAF.
Xaaf wuxuu ku fadhiyaa laan geedkeedi soodhacay, isagoo mooda inuu meel dheer saaranyahay oon la soo gaari Karin. Ma dareemin weliinuu dhulka soo dhacay uusan meelna saarneyn, cid badbaadi kartana aysan muuqan. MadaxdaAhlu Sunnah iyagaa iskood u yaaban, waxnauma tari karaan haddii ay haddii ay toban jeer doortaan. Madaxweynayaasha uu isugu yeeraynin waliba tiisaa heysata, isutagoodana waxbama kordhin karo inuu wax halleeyo mooyee. Waxaa jirta xikmad Carabi ah oo dheheysaMAN YARAA NAFSAHO QABLA ANYARAHU NAAS LAM YARAHU NAAS oomicnaheedu yahay NINKI ISAGA IS-ARKA IYADOON DADKU ARAG DADKU MAARKAAN.
Meesha ay wax ka khaldan yihiin waa inaysanjirin dowlad dhexe oo awood leh oo dareemikarta awooda uu dustuurku siinaayo. Haddaba, waxaan iga talo ah in dib loogu naqdo qab-dhismeedka dowlad goboleedka, lana soo saarotilmaan-shaqo ( job description) qeexayaawoodaiyo cidda soo dooran karta oon ahaynbarlamaan ku-sheeg ay igayu soo xuleen iyoguddiyo aan wax awood ah ku lahaynmaamulka gobolka kuwaasoo shacabka laga sooxulay isuna beddeli doona barlamaan.
Shariif Xasan oo ahaa ninka ugu khatarsanxagga isdaba mariska soona xulay barlamaankaKoofur-Galbeed si ay u doortaan, balse Ayaan darro ka daba timid, kaddib markii awood isagaka weyn uusan wax ka diidi Karin ay kulatalisay inuu isaga tago intey gtoori tahay, waanaqaatay taladi isagoo hercad ka dhoofayboqortooyadi uu dhistay.
Damaca madaxweynayaasha gobollada waxaaxoojinaya karti darrada dowladda dhexe oonweli awood u lahayn inay ka hadashodhibaatooyinka ka heysta xiriirka gobollada, waayoo waxay adeegsataa dad aan aqoonwaafiya u lahayn maul dal weyn oo Somaliya ookale ah. Waa xukuumad aan ka hadli Karin sitifaftiran howlaha kala dhexeeya madaxdagobollada iyo xuduuda ay cid waliba dhaafiKarin, waa haddii cid garaadkeedu gaarsiisanyahay dalka loo doorto.
Xukuumadda manta jirta waxay kacabsanaayaan xataa inay ka dhiidhiyaan kana jawaabaan tallaabooyinka is-xigxiga ee kusaleysan daan-daansiga Kenya iyo falalkagurracan ay caadeysatay, kaddib markii ay weysay cid iska celisa. Waryaa Farmaajo iyoKheyre u raadiya cid kala talisa hab-dhaqankadiplomasiyeed iyo maamulka danaha dalkaSomaliya oo maraaya marxaladi ugu xumeyd eedal gaaro, marka laga reebo dagaalki sokeeye.
Intaa oo dhan waxaa ka sii khatarsan inaymadaxdweynaha iyo R/wasaaraha ay iyagu islafiican yihiin oo isu heysta inay dalka meel fiicangaarsiiyeen. Waryaa u sheega inuu soo socdaFu’aad Shongole uu khubadihiisi ka billaabiraboo masaajidka Bakaraha oo xoog loogasaaray xilligi Sheikh Shariif.